ShweMinThar: GYM မှာ Trainer မငှါးပဲ ဘယ်လိုစဆော့မလဲ ???
အလေးမ မယ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ခါမှ မဆော့ဘူးတဲ့လူတွေက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မေးရမှာ ရှက်တတ်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဘယ်က ဘယ်လိုစရမှန်းမသိ၊ ဘယ်ဟာပဲ ကောက်ကိုင်လိုက်ရမလဲ မသိဖြစ်တတ်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဒီအချက်တွေကို မသိသေးလို့ Trainer ငှါးရင် ငွေပိုသုံးရတာလဲ အမှန်ပါ။
သာမန်လူတစ်ယောက် နားလည်လွယ်မယ့်၊ လိုက်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းတွေကို ဒီတစ်ခါ ရေးလိုက်ပါတယ်။
Gym မသွားဖူးသူများ၊ စသွားချင်သူများအတွက် အခြေခံ ဗဟုသုတများ(Guys)
အခု ဆောင်းပါးက Gym မသွားရသေးသူတွေ၊ Gym မှာ ဘာလုပ်ရမလဲ မသိသေးသူတွေ အတွက်ပါ။ စသွားပြီးစ သူများအတွက်လဲ သိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါလို့ အကျိုးရှိအောင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။
၁။ ကြွက်သား အမျိုးအစား
ခန္ဓာကိုယ်ပိုလှအောင် ပုံထွက်စေမယ့် အဓိက အပေါ်ပိုင်း ကြွက်သား အမျိုးအစားများကိုပဲ အရင်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ဓာတ်ပုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်က နားလည်လွယ်ပါတယ်။
၁) Chest (pectorlalis) ရင်ဘတ်
၂) Lats ဘေးအသား
၃) Biceps လက်မောင်းရှေ့
၄) Triceps လက်မောင်းနောက်
၅) Deltoids လက်မောင်းရင်း
၆) Trapezius ပုခုံး
၇) Abs ဗိုက်သား
ဒီခုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီနေရာကစပြီး အောက်မှ ရေးသားသမျှအတွက် ပုံကိုကြည့်၍ ဖတ်ပါက လွယ်ကူစွာ နားလည်ပါမည်။
၂။ လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစား
တချို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ကြွက်သား နှစ်မျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် သုံးမျိုး သုံးရပါတယ်။ အဲတာကို Compound exercise လို့ခေါ်ပါတယ်။
လက်ထောက်တွန်းတင် (ဒိုက်ထိုး) လုပ်တယ်ဆိုပါစို့။ သုံးရတဲ့ ကြွက်သားက Chest၊ Tricep နဲ့ Abs နဲနဲပါ။ Chest နဲ့ Tricep ကြီးချင်သူများအတွက် ဒိုက်ထိုးရင်း အကျိုးရှိသလို Abs ကိုပါ အနည်းငယ် အကျိုးပြုပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်စေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို Compound exercise လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နောက်လေ့ကျင့်ခန်း အမျိုးအစားတစ်ခုက ကြွက်သားတစ်ခုထဲသာ အကျိုးများများရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးပါ။ ဒုတိယ အလေးမနေတဲ့ ပုံအတိုင်းလုပ်ခြင်းဖြင့် Biceps ကြွက်သားအတွက်ပဲထိရောက်ပါတယ်။ ဒီလို လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို isolated exercise လို့ အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Isolated exercise ကို အလေးမပြီး ၀ါရင့်သူတွေ၊ ရင်ဘတ်ကြီးပြီး Triceps သေးနေလို့ Triceps ပဲပိုကြီးလာအောင် သက်သက်ဆော့ချင်သူတွေ အဓိကထား ဆော့ပါသည်။
Compund နဲ့ isolated နှစ်ခုမှာ Compound exercise က အချိန်နဲနဲဖြင့် အကျိုးများများ ရနိုင်သောကြောင့် အခုမှ စပြီးလုပ်ချင်သူတွေ Compound exercise ကိုပဲ အလေးထား လုပ်ဖို့ သင့်တော်ပါသည်။ နောင်ပြည့်စုံသွားမှ အသေးစိတ်လိုက်ပြင်ဖို့ isolated exercise ကိုလုပ်ပါ။ ပန်းချီဆရာ ပန်းချီဆွဲသလိုပေါ့ ခင်မျာ။
၃။ တစ်ပါတ် ဘယ်နှရက် လုပ်ရမလဲ???
ဒါကို သိဖို့ အခြေခံကြွက်သား လှုပ်ရှားပုံကို သိရပါမယ်။ လွယ်ပါတယ်။ ဆွဲတဲ့ကြွက်သား နဲ့ တွန်းတဲ့ ကြွက်သားလို့ သိရင်ရပါပြီ။
သင် ရေတစ်ပုံးကို ဆွဲမလိုက်ပြီဆိုပါတော့။ Biceps ကြွက်သားကို သုံးပါတယ်။
ဘားတန်း ခိုတယ်ဆိုပါစို့။ Lats ကြွက်သားဟာ ဆွဲတင်ဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။
အိပ်ထမတင်လုပ်ရင်လဲ Abs ဗိုက်ကြွက်သားက ဆွဲတင်တာပါပဲ။
ဆွဲတဲ့ကြွက်သားတွေက Biceps လက်မောင်းရှေ့၊ Lats နောက်ကျော၊ Abs ဝမ်းဗိုက်သား၊ Hamstring ပေါင်နောက်သား စသည်တို့ပါ။
သင် လက်ထောက်တွန်းတင် (ဒိုက်ထိုး) တယ်ဆိုပါစို့။ Chest နဲ့ Triceps ကတွန်းတင်မှသာ သင်လုပ်လို့ရမှာပါ။ ဒီလိုကြွက်သားမျိုးကို တွန်းတဲ့ကြွက်သားတွေလို့ သိရပါမယ်။
တွန်းတင်တဲ့ ကြွက်သားတွေက Chestရင်ဘတ်၊ Triceps လက်မောင်းနောက်သား၊ Deltoids လက်မောင်းရင်းသား၊ Quads ပေါင်ရှေ့သား စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မျိုးကို သိပြီဆိုရင် တစ်ပတ် ဘယ်နှရက်လုပ်သင့် သလဲကို ဖြေလို့ရပါပြီ။ ကြွက်သားတစ်မျိုးဟာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး၊ ဒါဏ်ဖြစ်သွားပြီးရင် ၄၈ နာရီ နားရပါ့မယ်။
သင် ပထမနေ့မှာ ဆွဲတဲ့ကြွက်သားသုံးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပဲ လုပ်ပါ။
သင် ဒုတိယနေ့မှာ တွန်းတဲ့ကြွက်သားသုံးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပဲ လုပ်ပါ။
စတုတ္ထနေ့မှာ တွန်းတဲ့ကြွက်သားက ၄၈နာရီ အနားယူပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်လည်လုပ်နိုင် ပါပြီ ခင်မျာ။
၄။ ဘယ်နှကြိမ်၊ ဘယ်လောက်လေးလေး မ ရမလဲ???
အကောင်ကြီးလာဖို့ ကြံရွယ်သူများအတွက် ၈ ကြိမ် နဲ့ ၁၂ ကြိမ် ကြားပမာဏသာမသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်လေးလေး မ သင့်သလဲက ဆယ်ကြိမ်လောက်၊ ဆယ့်တစ်ကြိမ်လောက်မှာ ဆက်မ မ နိုင်လောက်အောင် လေးတဲ့ပမာဏပါ။
အဲလိုမျိုး ဆယ့်နှစ်ကြိမ်လောက်ကို လေးခေါက် မ ရင် လုံလောက်ပါတယ်။
ဒီလောက်သိရင် Gym ရောက်တဲ့အခါ ဘယ်ဟာကို စကိုင်၊ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ သင်သိလောက်ပါပြီ။ ဆက်လက်သိလိုသည့် အချက်များရှိပါက Page wall မှာဖြစ်ဖြစ်၊ Comment မှာဖြစ်ဖြစ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဟိုး အရင်ကရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဗဟုတလေးပြန် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရင်လဲ ကူညီဝေမျှပေးပါ။ 😊
အခြား Fitness/Wellness tips တွေအတွက်လဲ Golden_Dreams Page ထဲ ဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ❤️
Posted by Alex Aung at 5:24 AM
Labels: ၀ိတ်ချနည်းများ, အားကစား
#​နောက်​​ကြောကြွက်​သား (back) သိပ္ပံနည်းကျ ကစားမယ်​
လုပ်ငန်းရှင်တွေ လျှော့တွက်လေ့ရှိတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်များ